ချစ်ကြည်အေး: ကျောထဲက ဓါး
Vista Wed Jun 16, 02:26:00 PM GMT+8
အားပါးပါး .. မိုက်ဒယ်ကွာ
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ Wed Jun 16, 02:30:00 PM GMT+8
ဘယ်သူမမကျောထဲကို ဓါးထည့်သွားလဲဟင်...:D ခင်လို့ စတာပါမမ။ ယုံကြည်ရတဲ့ လူထဲက သစ္စာဖောက်သွားတာများခံစားနေရသလားလို့....ခံစားနေရရင်လဲ ခေါင်းထဲက မြန်မြန်ထုတ်လိုက်နော်... သူ့ကြမ္မာ သူဖန်တီးသွားလိမ့်မယ်နော် မမ
ခိုင်နုငယ် Wed Jun 16, 02:32:00 PM GMT+8
ရေသန့်Wed Jun 16, 03:16:00 PM GMT+8
ကျောထဲက ဓါး ကြောင့်ရင်ကို ... ဖွင့် ချလိုက်ပါတယ်...
Moe Cho Thinn Wed Jun 16, 03:44:00 PM GMT+8
ကဗျာလဲ ရတာပဲကိုး။ :)
ခံစားချက်ပေါ်လွင်အောင် ဖွဲ့နိုင်တာ မိုက်တယ်။
အင်ကြင်းသန့် Wed Jun 16, 04:07:00 PM GMT+8
မမရေ....မိတ်ဆွေကောင်း မပီသတဲ့ လူတွေကို ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ထားမနေနဲ့တော့နော်....သူ့လမ်းသူသွားလိမ့်မယ်။ သူတို့ကြောင့် ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်မှာ အမှိုက်ထုပ်မရှိစေနဲ့....ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို ရဲရဲရင့်ရင့်သာ ဆက်လျှောက်ပါ....
Anonymous Wed Jun 16, 05:06:00 PM GMT+8
တည်ငြိမ်တယ်လို့ ထင်ရသလောက် အထဲက ဂယောက်ဂယက်ကို ဖုံးနေကြတာပါ
ကိလေသာမကုန်သေးတဲ့ လူမှန်သမျှ အလိုဆန္ဒ ရမ္မက်တွေနဲ့ နောက်မှာ အရှိန်တငြီးငြီးတောက်လောင်နေမှာပါ
နန္ဒာသိန်းဇံရေးတဲ့ စာအုပ်ထဲက မီးပွတ်တဲ့ ဥပမာလို့ မီးပွတ်တဲ့အတွက် ပွတ်နေတဲ့ အရာမှာလည်း ပူလောင်စေပါတယ်
ကိုယ်တိုင် မဟုတ်လို့ တရားနဲ့ဖြေပါလို့ မပြောလိုပါဘူး
ရှေ့လျှောက် ကြုံဦးမှာပါ။ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့သာပါပဲ
Cameron Wed Jun 16, 05:49:00 PM GMT+8
ကိုဇော် Wed Jun 16, 06:41:00 PM GMT+8
အမှန်ပဲ. . .
နောက်ကွယ်က ချောင်းရိုက်ချင်သူတွေ လောကမှာ များလာတယ် :P
စာဖတ်သူ Wed Jun 16, 06:43:00 PM GMT+8
"လျှာပါး စကားလုံး" ဆိုတာ နှုတ်သီကောင်း လျှာပါး လို့ ဆိုချင်တာလား...
ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ သိပြီ...
ဘလော့ဂ်ဂါထဲမှာ နှုတ်သီကောင်း လျှာပါး များများ မရှိဘူးလေ...
ချစ်ကြည်အေး Wed Jun 16, 07:57:00 PM GMT+8
ဗစ်စ်၊ ပူးတေ၊ ခိုင်နုငယ်၊ ရေသန့်၊ ချိုသင်း၊ ဂျင်ဂျင်း၊ အမည်မသိ၊ မိုးငွေ့၊ ကိုဇော် နဲ့ စာဖတ်သူ....ကော်မန့်တွေအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ...
နောက်ကျောက ဓါး... အင်း ဟုတ်တယ် ညက်ခုန်းမွေး ရိတ်တဲ့ဓါး ပြောပါတယ်...ဟိ ဟိ...:P
rose of sharon Wed Jun 16, 08:23:00 PM GMT+8
ညီမလေး Wed Jun 16, 10:39:00 PM GMT+8
ခဏခဏကြုံရဖူးတယ် မမချစ်ကြည်အေးရယ်။။။ သူတို့ကပဲ လည်လွန်းတာလား ကိုယ်ကပဲ ညံ့လွန်းတာလား ????
မောင် လေး Wed Jun 16, 11:33:00 PM GMT+8
နောက်ဆို ဟိန္ဒူဘုရားပွဲ မှာတောင် ဝင်ပြီး နတ်ဝင်လို့ရပြီ။
Anonymous Thu Jun 17, 12:12:00 AM GMT+8
အမရေ ကျောထဲကဓါး ကို အရမ်းကြိုက်လို့ မှာတင်ချင်ပါတယ်။ အမလင့်ခ် လဲပါပါတယ်။ ခွင့်ပြုပေးပါနော်။
Anonymous Thu Jun 17, 12:13:00 AM GMT+8
SHWE ZIN U Thu Jun 17, 12:42:00 AM GMT+8
ကျောထဲက ဓါးက ဘယ်လောက်တောင် ရှည်သလဲ ကွယ်...
သနားပါတယ်... အင်း လူတွေ လူတွေ ဘာတွေက မြဲမှာလည်း..
greenfingers Thu Jun 17, 12:57:00 AM GMT+8
နေ၀သန် Thu Jun 17, 10:25:00 AM GMT+8
ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာလေးဗျာ... တိုတိုလေးနဲ့ သာသာလေးထိအောင်ရေးတတ်လိုက်တာ...... မချစ်ကြည်အေးနာမည်ကို ခဏခဏမြင်ဖူးနေပေမယ့် ခုမှ လာလည်ဖြစ်တယ်.... တော်တော်ကောင်းတဲ့ဆိုဒ်လေးပါ... လင့်ခ်ပါ ယူသွားပါတယ်ဗျာ....
လသာည Thu Jun 17, 12:17:00 PM GMT+8
အား... နောက်ကျောကဓါး ခွဲထုတ်ပေးပါ .... (နောက်ထပ်ဓါးထက်ထက်နဲ့?)
ကဗျာလေးက တိုတိုလေးနဲ့ ထိလိုက်တာ အစ်မရယ်..
သဒ္ဓါလှိုင်း Thu Jun 17, 01:13:00 PM GMT+8
ဇွန်မိုးစက် Thu Jun 17, 05:12:00 PM GMT+8
sosegado Thu Jun 17, 06:34:00 PM GMT+8
ကျောခိုင်းမှတော့ အထိုးခံရပြီပေါ့ ကျောခိုင်းတတ်ဘို့လိုတယ်
တန်ခူး Thu Jun 17, 08:22:00 PM GMT+8
မ ရေ... ကဗျာလေးက ရင်ထဲကို အတော်ထိတယ်...ဘာလို့ လဲဆိုတော့ နောက်ကျောဓားနဲ့ ထိုးတာ ခံခဲ့ရဘူးလို့ ပါ...
ချစ်ကြည်အေး Thu Jun 17, 11:15:00 PM GMT+8
မရို့စ် ကျောချမ်းရင် အနွေးထည်ထုတ်ဝတ်ပလိုက်....
ညီမလေး သူတို့က လည်လွန်းတာနေမှာဘာ ကိုယ်ကတော့ မညံ့လောက်ဘူး ဘလော့ဂ်ဂွါပဲ ဥစ္စာ....
မောင်လေး ဒီတခါ ဟိန္ဒူနတ်ဝင်သည်လိုရင် အမကိုလည်း ခေါ်လိုက်...
အမည်မသိရေ ဖဘမှာ တင်ခွင့်ပေးပါတယ် တင်သာ တင်ပလိုက်စမ်းဘာ...
လက်ညှိုးအစိမ်းရောင်...သူရော၊ ကိုယ်ရော၊ ရှင့်ကျောမှာရော...အို...ကျောရှိတဲ့လူတိုင်းပေါ့....
နေဝဿန် လင့်ခ်အတွက် ကျေးဇူး၊ လာဖတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူး....ကျေးဇူးပါ
ညီမ လသာည...ဓါး...အသံတောင် ကြားချင်ဘူး....
ဇွန် တကယ်ဆိုရင်လည်း ညာရာရောက်အုံးမယ်....ဟယ်...ခိခိ
ကိုစိုစိ ကျောခိုင်းနည်းလေး သင်ပေးခဲ့အုံးမှပေါ့....
ညီမ တန်ခူး လူတိုင်းလိုလို ရှိကြမယ်ထင်ပါရဲ့ ညီမရယ်... ဝဋ္ဋ်ရှိသရွေ့ပေါ့ဟယ်...
မြစ်ကျိုးအင်း Fri Jun 18, 03:52:00 AM GMT+8
သူ့ ကံနဲ့ သူ သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ပူလောင်နေရရင် နှစ်ခါ နစ်နာလိမ့်မယ် အစ်မရေ...။
ကမ္ဘာ့ဖလားကြောင့် အိမ်လည်မထွက်အားလို့ ခုမှပဲ ရောက်ဖြစ်တော့တယ်။
ဏီလင်းညို Fri Jun 18, 12:01:00 PM GMT+8
ချိုကျ Mon Jun 21, 09:58:00 AM GMT+8
ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ကျောခိုင်းမိတာပေါ့။ မယုံကြည်ရတော့လည်း ဓားတစ်ချောင်း လက်ဆောင်ရသွားတာပေါ့နော်။ သင်ခန်းစာပေါ့အစ်မရယ် နော်...
ခွန်မြလှိုင် Wed Jun 23, 04:58:00 PM GMT+8
ဆင်ချင်း တုိုက်ကြပြီးတော့ အချင်းချင်း ကျောခိုင်းတော့မယ် ဆိုရင် နောက်ပြန် လမ်းလျှောက်ပြီး တော်တော်ဝေးဝေး စိတ်ချရတဲ့ အကွာအဝေး ရောက်မှ ကျောခိုင်းကြတယ် ပိုလည်တဲ့ ကောင်က ရုတ်တရက် ကျောကို အစွယ်နဲ့ ထုိုးမှာ စိုးလို့တဲ့.... ဆင်တွေဆီကနေ ပြန်ပြီး သင်ယူထားလိုက်လို့ခုနောက်ပိုင်းတော့ သိပ်မခံရတော့ဘူး အမ ရေ။ ဒါပေမယ့် ခံလိုက်ရမှန်းကို မသိလိုက်အောင် တုံးအ နေသေး တာလားတော့ မသိဘူးပေါ့ :P